I-Raw Lapatinib (231277-92-2) HPLC =98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / Lapatinib
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Lapatinib (i-CAS 231277-92-2), phantsi kommiselo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
ILapatinib powder liyi-anti-cancer drugs eyenziwa nguGlaxoSmithKline (GSK) njengonyango lwezilonda ezinzulu ezifana nomhlaza wesisu kunye nomphunga. Yavunywe yi-FDA ngo-Matshi 13, i-2007, ukusetyenziswa kwizigulane ezineomhlaza wesibeletho se-metastatic eziphambili ngokubambisana neCopecitabine. I-Lapatinib yintlobo ye-epidermal yohlobo lokufumana uhlobo lwe-2 (HER2 / ERBB2) kunye ne-epidermal ukukhula kwe-factor receptor (HER1 / EGFR / ERBB1) i-tyrosine kinase inhibitor. Ibopha kwi-intracellular domain phosphorylation ukukhusela i-receptor autophosphorylation kwi-ligand yokubopha.
ILapatinib ezisisiseko Iinkcukacha:
I-molecular Formula: C29H26ClFN4O4S
Isisindo somzimba: 581.0575432
II. Ukusetyenziswa kweLatatinib (231277-92-2) kumjikelezo we-steroids
I-Lapatinib (i-CAS 231277-92-2), igama lohwebo nguTykerb, iTyver.
2. Ukusetyenziswa kweLapatinib:
I-1) I-Lapitinib yi-tablet emele ithathwe ngomlomo.
2) Iibhulile ziza kubukhulu bezilwanyana ze-1, 250mg.
3) Thatha i-lapitinib ngokuchanekileyo njengoko iyaliswe ngugqirha wakho.
I-4) I-Lapitinib kufuneka ithathwe ubuncinane kwiyure enye ngaphambi kokuba, okanye ubuncinane iyure enye emva kokutya (thabatha umthamo wexesha elifanayo kwimihla ngemihla, ukuhlukana kwamanani akunconywanga).
5) Ungadli okanye ungaphuze iimveliso zamagilebhisi ngelixa uthatha iLatatinib (231277-92-2).
6) Ukuba ulahlekelwa umthamo we-lapitinib, thatha ngokukhawuleza ukuba ukhumbule loo mini. Ukuba uphoswa ngemini, musa ukuphindaphinda umthamo wakho ngosuku olulandelayo. Vele udibe idilesi ephosakeleyo.Cwangcisa umboneleli wakho wezempilo xa ungaqinisekanga ukuba wenzeni.
7) Ugqirha wakho unokukwazi ukulungelelanisa i-dose ye lapatinib ngokuxhomekeke kwindlela onyamezela ngayo unyango.
3. Isexwayiso kwiLatatinib
I-Lapatinib inokubangela ukuba umonakalo wesibindi unokuba nzima okanye usongela ubomi. Umonakalo wesibindi ungenzeka ngokukhawuleza iintsuku eziliqela okanye emva kweenyanga eziliqela emva kokuqala kwonyango neLapatinib (i-CAS 231277-92-2). Tshela ugqirha wakho ukuba uye waba nesifo sesibindi. Ukuba unayo nayiphi na impawu ezilandelayo, biza ugqirha wakho ngokukhawuleza: ukubetheka, ukuphuka okwephumba okanye amehlo, umchamo omnyama, intlungu ephezulu kwinxalenye yesisu, ukuphaphaza okungavamile okanye ukunyunyuza, okanye i-pale or dark stools.
Gcina zonke izithuba kunye nogqirha wakho kunye nebhubhoratri. Ugqirha wakho uya kulawula ezinye iimvavanyo zelabhoratri phambi kwangexesha lonyango lwakho ukuze ubone ukuba isibindi sakho singonakaliswe okanye sonakaliswe yi-lapatinib.
Thetha ugqirha wakho malunga nobungozi bokuthatha i-lapatinib.
I-Lapatinib luhlobo lomdlavuza wegciwane olujoliswe (unyango lwe-biological) olubizwa ngokuba ngumprotein kinase inhibitor (TKI). Yilonyango olujoliswe ekusebenziseni i-cancer elineeprotheni ezinkulu ezibizwa ngokuthi i-HER2 (i-epidermal growth factor receptor 2).
Ezinye i-cancer zebele zineenani elikhulu ze-HER2. Babizwa ngokuba ngabaxhasi be-HER2. I-HER2 yenza ukuba iiseli zomhlaza zikhule kwaye zahlule. I-Lapatinib (231277-92-2) iyicima i-HER2 ukwenza iiseli ziyeke ukukhula okanye zife.
III. I-Lapatinib (231277-92-2) i-HCML
IV. Indlela yokuthenga iLapatinib kwiAASraw?
Yiba ngowokuqala ukuphonononga "iLapatinib" Rhoxisa impendulo
I-Nootropics powder (16)
I-Nandrolone powder Series (8)
Ukusetyenziswa kwamadoda (4)
I-Fat Loss powder (32)
PCT Izidakamizwa (8)
06 / 19 / 2018 UDkt Patrick Young56
09 / 12 / 2018 UDkt Patrick Young54
01 / 17 / 2019 UDkt Patrick Young
01 / 08 / 2019 UDkt Patrick Young
12 / 27 / 2018 UDkt Patrick Young
12 / 18 / 2018 UDkt Patrick Young
12 / 14 / 2018 UDkt Patrick Young0